juin 2015 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Azontsika Alaina sary an-tsaina hoe isika mandeha sambo ary monja mahery ny rano dia mety hanao ahoana ny fihetseham-po antsika. Jesoa miaraka aminy nefa mahagaga fa ny sambo efa mitsingilahila, ny rano efa tafiditra nefa mbola misy olona mahita tory ihany. Mapametra-panontaniana izany zavatra izany, ny mpianatra tsy mitombona intsony fa natahotra hoe ho rendrika ny sambo raha izao no mitohy. Dia nofohazina I Jesoa ary hoy izy ireo: “Ry mpampianatra o! tsy mampaninona anao ve raha ho faty izahay?” Izany hoe I Jesoa tsy tafiditra ao anatiny. Niarina I Jesoa ka niteny mafy ny rivotra << mangina, mitonia>>, niaraka tamin’izay dia lasa tony dia tony ny ranomasina. (suite…)
Continuer la lecture Alahady 21/06/2015 : Toriteny
Iza moa io, fa ny rivotra sy ny ranomasina avy no manaiky Azy? (suite…)
Continuer la lecture Alahady 21/06/2015 : Tenin’ Andriamanitra
Fetin’ny Trinite Masina, dia io Evanjely io no hasiantsika teny satria ny vakiteny voalohany dia mampiseho ny halebiazan’Andriamanitra satria izy no niteny tamin’ny vahoaka. Ao amin’ny vakiteny faharoa no ilazana fa ny Fanahim-pananganan-janaka no noraisintsika ka ahafahantsika miantso hoe Ray, Aba an’Andriamanitra tahaka an’I Jesoa. Ny vakiteny fahatelo dia ny resaka farany nataon’I Jesoa tamin’ireo mpianany talohan’ny nialany tamin’izao tontolo izao. (suite…)
Continuer la lecture Alahady Trinite masina 31/05/2015 : Toriteny
Manaova Batemy azy ireo amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. (suite…)
Continuer la lecture Alahady Trinite masina 31/05/2015 : Tenin’Andriamanitra